Accueil > Gazetin'ny nosy > Antananarivo sy ny manodidina: Mamely mafy indray ny delestazy
Antananarivo sy ny manodidina: Mamely mafy indray ny delestazy
Velontaraina indray ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina noho ny fahatapahan-jiro na delestazy matetika izay niseho tato anatin’ny andro maromaro. Tao anatin’ny herinandro teo izay no tena namely mafy ny delestazy ary saika voakasika avokoa ny fokontany rehetra eto Antananarivo, hatrany amin’ireo kaominina manodidina ny renivohitra. Na tamin’ny andron’ny krismasy teo aza dia maro ny tokantrano niaina an’izay delestazy izay. Marihana fa tsy mitovy ny faharetan’ny fahatapahan’ny jiro satria misy amin’ireo faritra sasany no maharitra ora maromaro, misy kosa no maharitra minitra vitsy saingy miverimberina matetika ao anatin’ny ora maromaro. Na maraina na atoandro na alina dia misy an’izay fahatapan-jiro izay kanefa tsy misy ny fampilazana avy amin’ny Jirama. Eto Antananarivo sy ny manodidina aza moa dia izany no zavatra iainan’ny mpanjifa, vaomainka fa any amin’ny faritra lavitry ny renivohitra any. Tsy fantatry ny vahoaka intsony ankehitriny ny tena marina momba ity resaka delestazy ity satria efa betsaka ihany vahaolana sy ny fanapahan-kevitra noraisan’ny fitondram-panjakana sy ny mpitantanana ny Jirama kanefa mbola tsy mety foana ihany ny delestazy fa ny mifanohitra amin’izany aza no hitan’ny be sy ny maro. Fanamby napetraky ny tale jeneraly ny orinasa Jirama vaovao Olivier Aimé Jaomiary, tamin’ny fotoana nandraisany ny toerany, ny hanafoana tanteraka ity delestazy ity saingy 8 volana aty aoriana aloha dia tsy mbola hita ny vokatra. Etsy ankilany anefa dia entitra ny Jirama amin’ireo mpanjifany, avy hatrany dia tapaka ny herinaratra ho an’ireo tsy mahaloa ny vidin-jiro araka ny tokony ho izy.
Farafangana : Nilamina ny fankalazana ny krismasy
Fetin’ny ankizy hoy izy ny sasany, fankalazana ny nahaterahan’ny jesoa hoan’ny kristianina ny noely, amin’ny ankapobeny dia nizotra am-pilaminana ny fankalazana izany andro izany teto Farafangana renivohitry ny faritra Atsimo Atsinanana. Ireo toeram-pivavahana dia samy nikarakara ny sasakalina avy, io moa dia fomba filazana ihany fa niezaka namarana ny sorona masina manodidina ny iraiky amby folo alina amin’izay mba hahafahana mamomjy milamina ny tokantrano. Ny andro koa maina ka tsy vitsy ireo nivavaka ny harivan’ny efatra amby roapolo desambra. Ny ampitson’io kosa dia feno ireo fiangonana tamin’ny lamesa maraina, ny fanazavana moa dia maro ireo mpiala sasatra tonga mivavaka ary misy ihany koa ireo olona tsy mandeha am-piangonana amin’ny fotoana an-davanandro ka miezaka ny ho tonga amin’io andro io. Amin’ny ankapobeny dia azo lazaina fa nilamina ny fankalazana ny krismasy teto Farafangana ary manantena ny olona fa mba ho sahala amin’izany ihany koa ny amin’ny faran’ny taona mba hitsenana ny taona vaovao anatin’ny fahatonina tanteraka, ny delestazy moa tsy nisy ka deraina manokana ny Jirama amin’ny ezaka natao. Vita ny krismasy fa hoan’ny mpino katolika kosa dia efa miroso sahady amin’ny fanomanana ny fanandratana ho olomasina an’i ramose Lucien Botovasoa izay ho tontosaina ao Vohipeno amin’ny volana aprily ary ny an’ny tanora kosa dia ny fihaonambe andiany fahasivy izay hatao any Mahajanga amin’ny volana septambra amin’ny taona 2018.